အစ်ဆက် နှံကောင် | ဒါက သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား
မိသားစုအတွက် အကူအညီ စိတ်ထိန်းချုပ်တတ်လာအောင် ကလေးတွေကို သင်ပေးခြင်း
သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အညီ အသက်ရှင်
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား အစ်ဆက် နှံကောင်မှာရှိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်များ
သင်ခန်းစာ ၁– မိဘတို့ကို နာခံပါ
နိုးလော့! | သြဂုတ် ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဗီယက်နမ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မာလဂက်စီ မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လူဗာလီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုရိုမို အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
အစ်ဆက် နှံကောင်မှာရှိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်များ
ခွေးသွားစိပ်တွေဆိုတာ လူတွေပဲတီထွင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ သိထားခဲ့ကြတာပါ။ အခု အဲဒီအမြင် မှားတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားပြီ။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တိတိကျကျ အချိတ်အဆက်မိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်တွေကို သက်ရှိသတ္တဝါငယ်လေးဖြစ်တဲ့ အစ်ဆက် နှံကောင်မှာ ရှာတွေ့ ခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီအကောင်ငယ်လေးကို ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ ဥယျာဉ်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်။ *
အစ်ဆက် နှံကောင်ပေါက်လေးဟာ တစ်စက္ကန့်မှာ ၃.၉ မီတာ (၁၂.၈ ပေ) နှုန်းနဲ့ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တစ်ထောင်ပုံ နှစ်ပုံ အချိန်လေးအတွင်းမှာ မြေကြီးဆွဲငင်အားကို အံတုပြီး သူ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အဆလေးရာနီးပါးအမြင့်ကို ခုန်နိုင်တယ်။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ ပျောက်သွားတတ်တယ်။ အဲဒီလိုခုန်ဖို့ သူ့ရဲ့နောက်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဟာ တူညီတဲ့အားသုံးပြီး တစ်ပြိုင်တည်း ခုန်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုခုန်နိုင်ရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
သုံးသပ်ကြည့်ပါ– နှံကောင်ရဲ့ နောက်ခြေအရင်းမှာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တိတိကျကျ အချိတ်အဆက်မိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်တွေ ရှိနေတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီခွေးသွားစိပ်တွေက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ခုန်နိုင်အောင် ကူညီပေးတယ်။ အဲဒီလို တစ်ပြိုင်တည်း ခုန်တာမဟုတ်ရင် ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ဘဲ ချာချာလည်နေမှာဖြစ်တယ်။
သတ္တဝါကြီးတွေကတော့ ခုန်တဲ့အခါ ခြေတစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ဖို့အတွက် အာရုံကြောစနစ်က ကူညီပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစ်ဆက် နှံကောင်ပေါက်လေးတွေရဲ့ အာရုံခံနိုင်မှုဟာ အလွန်နှေးကွေးတာကြောင့် ခွေးသွားစိပ်တွေက အကူအညီပေးရတယ်။ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်၊ သုတေသီတစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဂရယ်ဂိုရီ စတ်တန်က “ခွေးသွားစိပ်တွေလို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့က လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သွားမြင်မိတယ်” လို့ပြောတယ်။ အကြောင်းကတော့ “[တခြားနေရာတွေမှာ] မရှာဖွေမိသေးလို့ပါ” လို့ဆက်ပြောပါတယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ အစ်ဆက် နှံကောင်မှာရှိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်တွေ တိတိကျကျ ချိတ်ဆက်နေတာဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြုလုပ်ဖန်ဆင်း ခံထားရတာလား။
^ စာပိုဒ်၊3အစ်ဆက် နှံကောင်လေး သက်ကြီးဘဝပြောင်းဖို့ အရေခွံလဲတဲ့အခါ အဲဒီခွေးသွားစိပ်တွေ ပျောက်သွားတယ်။
သြဂုတ် ၂၀၁၅ | ဒီအဲန်အေ—သက်ရှိစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့တူ
နိုးလော့! သြဂုတ် ၂၀၁၅ | ဒီအဲန်အေ—သက်ရှိစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့တူ